Toekarena manga: hampiasa 2,7 miliara dolara eto amintsika ny Sinoa | NewsMada
Toekarena manga: hampiasa 2,7 miliara dolara eto amintsika ny Sinoa
Natao sonia tany Chine ny fiandohan’ity volana septambra ity ny fampiasam-bola ataon-dry zareo Sinoa eto Madagasikara miaraka amin’ny AMDP* ho fitrandrahana ny ranomasina hampihodina ny toekarena eto an-toerana. Vola mitentina 2,7 miliara dolara ny hoenti-miasa amin’izany mandritra ny 10 taona.
Nandritra ny fihaonana an-tampony eo amin’ny firenena afrikanina sy i Chine no nanaovana izany fifanarahana izany. Ny « Taihe Century Investments Developments » no hampiasa vola eto Madagasikara, hiteraka asa mivantana 12.000, ato anatin’ny telo taona voalohany. Tetikasa nofaritana hifantoka amin’ny toekarena manga hitrandrahana ny ranomasina eo amin’ny sehatry ny jono sy ny ady atao amin’ny jono tsy ara-dalàna, ny fiompiana ny vokatra an-dranomasina, ny fizahantany manodidina ny morontsiraka.
Tetikasa iray hafa, ny fanodinana ranomasina ho ranomamy hanondrahana ny velaran-tany any Androy, hampiasam-bola 50 tapitrisa dolara. Hisy koa ny fanamboarana trano afaka miatrika rivo-doza.
Tsy ampy betsaka ny fitrandrahana ireo sehatra ireo, ny ilazana azy ho toekarena manga, raha eto amintsika. Maro anisa amin’ny mponina anefa ny miveloana any amin ‘ny morontsiraka, 5.600 km. Tsy latsaky ny 60 ny orinasa hahazo tsena amin’ireo karazana tetikasa ireo, ho amin’ny telo taona voalohany.
Hitandrovana ny mpanjono madinika ?
Hatomboka amin’ny faran’ity taona 2018 ity ny ampahany voalohany amin’izany toekarena manga izany, hanodinana vola 700 tapitrisa dolara. Zava-dehibe ho an’i Madagasikara izao fifanaraham-piaraha-miasa izao raha samy hahita tombony tokoa ny andaniny sy ny ankilany. Raha eo amin’ny jono, ohatra, ahoana ny fomba na fepetra hitandrovana ny tombontsoan’ireo mpanjono madinika mampiasa lakana hatramin’ny razamben’izy ireo ?